Bukela i-TV Shows Online (2020) - Amasayithi wamahhala we-TV - Ezokuzijabulisa
Ezweni lapho sonke sincike kwi-Intanethi, kunamawebhusayithi amaningi akuvumela ukuthi ubuke imibukiso ye-TV yamahhala online.Kodwa-ke, amanye amasayithi imikhonyovu yesikhathi enkulu evumela izivakashi ukuthi zibhalisele imali, ezinye zizama ukukukhohlisa ngokungeza izandiso ezisolisayo kusiphequluli sakho.Iningi lamawebhusayithi okusakaza mahhala ligcwele izikhangiso eziningi kanye nezigelekeqe.
Ezinye zingaba yingozi enkulu futhi ngaphandle kokuqwashisa kwakho, ezinye izinhlelo ezifihliwe zingangena ohlelweni lwakho bese zintshontsha idatha yakho njengolwazi lwama-akhawunti akho asebhange, amaphasiwedi, ezinye izinto ezibalulekile noma zingalandelela nomsebenzi wakho.
Ukugwema izimo ezinjalo, ngizokuncoma kakhulu ukuthi usebenzise ifayela le- I-VPN yokusakaza . Ikuvikela kumasayithi anonya nezikhangiso ezingafuneki.Amanye amasayithi lapho ungabuka khona imibukiso ye-TV online mahhala.
I-Tubi iyiwebhusayithi ye-TV esakazwa ku-inthanethi ekuvumela ukuthi ubuke noma yiziphi iziqephu zemidlalo ye-TV ngaphandle kokubhalisa.Ikuvumela ukuthi udale uhlu lwamawashi lwezintandokazi bese uqala kabusha ukudlala kumafoni ahlukene.Le webhusayithi ine-interface ehlanzekile nazo zonke izigaba ezifana namaDrama we-TV, i-Crime TV, ama-TV Comedies, ne-Reality TV.
I-Tubi inikeza imibukiso ye-TV ngekhwalithi enhle futhi futhi inezinhlobonhlobo eziningi zama-movie okungakufanelekela ukuwahlola.
Lena enye iwebhusayithi yokusakaza yamahhala ye-TV ekuvumela ukuthi ubuke imibukiso ye-TV yamahhala online.Uzothola okuqukethwe okuningi kwasekuqaleni okusingethwe kuwebhusayithi ezinhlotsheni ezahlukahlukene ezinjenge - idrama, isenzo, amahlaya, i-horror, i-sci-fi, njll.
Iphinde ivumele abasebenzisi bayo ukuthi bababuke kumadivayisi amaningi.Ineqoqo elimangalisayo lama-movie nemibukiso ye-Tv yazo zonke izinhlobo zamaqembu weminyaka, kungaba ngezingane ezingama-90 noma ubani.
3. Ama-movie we-Snag
Ama-Snagfilms anikezela ngamaqoqo anhlobonhlobo afana neDrama, Izingane, Ezemvelo, Umlando Womhlaba, Izilwane Zasendle kanye Nomndeni.Kepha, ungadumala kancane uma ufuna uchungechunge lwamanje lwe-TV.
Uma kwenzeka unentshisekelo yokubuka amanye ama-movie akudala nama-documentary awina imiklomelo, nakanjani uzoyithanda le webhusayithi.Leli sayithi linalo nohlelo lwalo lwe-Android, Roku, Smart TV, iOS, neWindows.Ngenkathi ubuka noma yimiphi imibukiso noma i-movie, ungahle uhlangane nezikhangiso ezithile kepha lokho kufanele kulunge uma nje uthola imibukiso yamahhala emangazayo ongayibuka.
Kusukela manje, kunemibukiso engaphezu kuka-300 + kanye nama-movie amaningi umuntu angawasakaza kuVudu. Inohlu lwemidlalo ye-TV namabhayisikobho noma yibaphi abasebenzisi bayo abangayibuka mahhala.Ake sithi, uma ungawutholi umbukiso ozowubuka, ungaqasha imibukiso ephelele ye-TV namabhayisikobho ngamarandi nje ambalwa.
IVudu iyingxenye yesevisi yeWalmart empeleni okusho ukuthi ungakhipha amakhadi futhi ugcine nezimali ezimbalwa zokunikezwa nokuthengiswa kwonyaka.Njengomsebenzisi weVudu, sijabule kakhulu ukubona ezinye zezihloko zochungechunge zakamuva nezaziwa kakhulu lapha. Njengoba kunemibukiso nama-movie amaningi wamahhala atholakala lapha, iVudu impela iyinsiza yokuzama.
5. Yabelana ngeTV
Ngokungafani namanye amawebhusayithi wamahhala atholakalayo, i-ShareTV iyinjini yokusesha ekuvumela ukuthi useshe imibukiso ye-TV nama-movie kwipulatifomu ehlukile.Kuyindlela engcono kakhulu ukucinga imibukiso ye-TV ofuna ukuyibukela i-inthanethi.Lapho usuthole isihloko sakho esikrinini, manje usungasibuka ngasikhathi sinye.I-interface nayo ilula ngezigaba eziningi nezihlungi ukukusiza ukuthi ubheke noma yini obukade ukufuna.
Ongakwenza nje, mane uthayiphe igama lombukiso we-TV ofuna ukuwubuka bese ucindezela inkinobho yokusesha. Umshini wokusesha uzokukhombisa zonke izixhumanisi ezikhona lapho ungabuka khona imibukiso ye-TV mahhala ku-inthanethi noma ngokuya kuhlelo olukhokhelwayo.
Futhi, le webhusayithi ingumlingani osemthethweni weHulu.Zimbalwa izinhlelo ze-TV ezivela eziteshini ezidumile ezenziwa zitholakale ngenxa yobambiswano phakathi kwalezi zingxenye ezimbili zokusakaza.
Lapho ngizwa sengathi ngivakashela ipulatifomu enikezela ngokuqukethwe okuhlukahlukene, iContv yiwebhusayithi yokuqala efika engqondweni.Ungathola noma yini lapha kule webhusayithi, kungaba ama-Anime neMibukiso ye-TV, noma ama-Movie, inezinhlobo eziningi zokunikela.Yize leli sayithi lithandwa kakhulu nge-anime yalo namahlaya. Kepha, kubambe ukunakwa okuningi ngokuqukethwe kwayo.
Awudingi ukuthi ukhathazeke uma iziqephu ziyingxenye noma kumane kuyi-trailer njengoba lapha uzothola okuqukethwe okugcwele kuphela.IConTv inikela ngokubhaliselwe kwamahhala nokukhokhelwa kwe-premium. Kepha, insizakalo eyisisekelo ihlala ingenazindleko.
Lesi ngesinye sezingxenyekazi ezinhle kakhulu zokusakaza ukubukela imibukiso ye-TV namamuvi ku-inthanethi ngaphandle kokubhalisa. Leli sayithi kade linikezela ngezinsizakalo zokusakaza.Yize le webhusayithi ingenazo izihlungi ezinjengohlobo, izwe, isilinganiso njll ngokungafani nokuthi amanye amawebhusayithi anenketho yokuhlunga kanjani.
Kule webhusayithi, ungathola ibha yokusesha kuphela ukucinga umbukiso wakho we-TV owuthandayo.Ibala imibukiso ye-TV ngazo zonke izixhumanisi zokusakazwa kweziqephu futhi ibuye ifake yonke imininingwane mayelana nombukiso we-TV njengabalingisi, uhlobo.
Uthola amaseva amabili ukusakaza umbukiso wakho we-TV owuthandayo ku-inthanethi lapha, uma ngabe isixhumanisi esisodwa singasebenzi kahle, unenye inketho yokubuka i-TV Show yethu eyintandokazi.
Engikuthanda kakhulu ngale webhusayithi ukuthi ayinazo izikhangiso nama-pop ups angeziwe. Yindawo yokusakaza yamahhala yokubuka imibukiso ye-TV online ngaphandle kokubhalisa.I-MovieJoy inamaqoqo amaningi wezinhlelo ze-TV ngekhwalithi ye-HD.
Ungahlunga imibukiso ye-TV ngokuya ngekhwalithi, unyaka wokukhishwa, uhlobo, nezwe.Ngaphandle kwenketho yokuhlunga, ungasebenzisa futhi ibha yokusesha etholakala phezulu ukusesha noma iyiphi i-movie ethile okungenzeka ukuthi uyifunayo.Le webhusayithi iqhubeka nokuvuselela umtapo wayo namaqoqo. Ngakho-ke ungathola zonke iziqephu ze-TV kalula.
ISoap2Day ineqoqo elikhulu impela lochungechunge lwe-TV.Futhi ikuvumela ukuthi uhlunge uchungechunge lwe-TV olususelwa kuNyaka, Uhlobo, isilinganiso, nokuthandwa.Uma uzobuka noma yimuphi umbukiso we-TV kuwebhusayithi, ungamane useshe igama lohlelo lwe-TV kubha yokusesha, iwebhusayithi izokukhombisa imiphumela.
Futhi, awudingi ukubhalisela ukubuka noma yimiphi imibukiso ye-TV.Le webhusayithi inezikhangiso eziningi nezigelekeqe ezingacasula kakhulu kwesinye isikhathi.
10. Amafilimu wamahhala aku-inthanethi
Le ngenye futhi indawo yokubuka imibukiso ye-TV ku-inthanethi mahhala ngaphandle kwenkinga yokubhalisa.Leli sayithi lineqoqo elilinganiselwe lemibukiso ye-TV futhi ngaphandle kwemibukiso ye-TV, futhi likuvumela ukuthi ubuke ama-movie online.Iza nezikhangiso eziningi kanye nezigelekeqe.Okuqukethwe kuhlukaniswe ngaphansi kwama-Movie, Imibukiso ye-TV, nokunye okuningi.
Futhi, inamaseva amabili okudlala noma yikuphi okuqukethwe kwevidiyo.Ake sithi, uma ungakwazi ukudlala neseva eyodwa, zama enye. Lokho kungasebenza nakanjani.
Ngalezi zingosi ezimangazayo, awudingi ukuphuthelwa yizinhlelo zakho ze-TV ozithandayo. Noma umatasa kakhulu ukuvula i-TV yakho. Ungakhathazeki! Kusukela manje, sinamawebhusayithi ambalwa aku-inthanethi wokubuka imibukiso ye-tv online esebenza ngaphandle kokubhaliselwe.
Odinga ukukwenza nje, yiya kunoma yimaphi amasayithi esiwabalile ngenhla bese ufuna uhlelo lwakho lwe-Tv oluthandayo, uchofoze kulo futhi ungabanjelwa umbukiso we-TV owuthandayo.
Kukhona nokuqoqwa kwama-movie okutholakala kulawa mawebhusayithi. Inikeza ukufinyelela kwamahhala kumabhayisikobho nemibukiso ye-TV yansuku zonke.
Ungasithola Kanjani Isaphulelo Somfundi seHulu?
Ungayisebenzisa kanjani iTubi TV?